Ukusebenziseka Kwenjini Yokucinga: Kulula Noma Kunzima? | Martech Zone
Ukusebenziseka Kwenjini Yokucinga: Kulula Noma Kunzima?
NgoMsombuluko, Mashi 30, 2009 NgoMgqibelo, Juni 16, 2018 Douglas Karr
Kukhona ithoni lemininingwane kuwebhu yokuthi ungayisebenzisa kanjani iwebhusayithi. Ngeshwa, ama-99.9% amawebhusayithi asenakho noma yikuphi ukwenziwa okuhle. Angizihlukanisi njengochwepheshe we-SEO, yize ngikholelwa ukuthi ngine- ukuqonda ngokuphelele izakhi ubambe iqhaza 'ekukhipheni ukhaphethi obomvu' wezinjini zokusesha.
Lapho abangane bami becela izeluleko, ngibanikeza izisekelo:
Bhalisa isiza sakho nge I-Google Search Console ukuqinisekisa ukuthi ikhonjisiwe futhi ayinazinkinga. Lokhu kuzokhomba izithuthukisi okufanele uzenze - njengokusebenzisa amamephu esayithi namafayela wamarobhothi.
Ucwaningo amagama angukhiye ukuthi abaseshi basebenzise ukubheka imikhiqizo namasevisi owanikezayo. Isibonelo esisodwa umngane ophethe inkampani yokuthumela imiyalezo… kepha engenalo igama ukumaketha amaselula kokuqukethwe kwesayithi lakhe. Lokhu akuyona into ehlukile - kuvame kakhulu!
Ukuqonda ukuthi ungawasebenzisa kuphi amagama angukhiye… kusuka egameni lesizinda, I-URL or iposi slug, isihloko sekhasi, ithegi ye-h1, izihlokwana, umbhalo obhalwe ngokugqamile, njll. kanye nokuqinisekisa ukuthi amagama asemqoka asetshenziswa kaningi ngaphakathi kokuqukethwe.
Ukubona ukuthi izixhumanisi ezinamandla zamagama angukhiye abuyele kusayithi lakho kuzokhulisa kakhulu izinga lesiza sakho kulawo magama angukhiye. Isu elihle le-backlink lingavele libe yingxenye yezingxoxo namazwana kwamanye amabhulogi embonini.
Mhlawumbe into ebaluleke kakhulu yile umane ubhale okuqukethwe okuhle futhi ukubhale kahle. Awukwazi ukuwina i-raffle uma ungathengi ithikithi. Okufanayo kuya ngezinjini zokusesha - awukwazi ukukala umphumela wenjini yokusesha uma ungenakho okuqukethwe okuhambisana nosesho. Thenga amathikithi amaningi futhi amathuba akho okutholakala akhule ngendlela ephawulekayo. Lezi zibalo zilula kakhulu.
Ezinye izimboni namagama asemqoka ancintisana kakhulu nawo idinga utshalomali oluningi - kubuchwepheshe, isikhathi, okuqukethwe namasu wokuxhumanisa emuva. Uma ufuna ukucwilisa ngokujulile, ngincoma ukujoyina iMoz. Okungenani funda amaMoz Izici Zokusekwa Kwenjini Yokucinga ukuze uqonde ngokugcwele umthelela izinto zekhasi ezilula ezingaba nawo ekulinganisweni kwenjini yakho yokusesha. Kukhona okuningi Izindatshana ze-SEO lapho futhi!
Ukusesha Kwendawo Kuyakhula, Ingabe Usekhona Emephini?
Mar 31, 2009 ku-12: 21 AM
Amathiphu aqinile. Ngithola i-SEO idida kakhulu futhi iyangicasula ngoba ngiyazi ukuthi ibaluleke kangakanani. Ngifunda kancane kancane futhi ngiba ngcono kuwo. Kepha into eyodwa engiyitholile ukuthi noma ngabe ngiyazi ukuthi i-SEO yami yonke mhlawumbe imbi kabi nje ukukhipha okuqukethwe kusiza kakhulu.
Bhala kaningi futhi usebenzise amagama akho angukhiye. Kuzothatha isikhathi kepha kuhle kakhulu nge-google.
Ngo-Apr 1, i-2009 ku-2: 56 AM
Ngicabanga ukuthi uhlanganise zonke izihloko ezinkulu okudingeka uzicabangele ku-SEO. Kunezinkampani eziningi futhi ochwepheshe be-SEO abasenalo ulwazi ngalesi sihloko. Ngiphakamisa ukusebenzisa i-google adwords ithuluzi elingukhiye elingaphandle ekukhetheni igama elingukhiye elifanele.
Ngo-Apr 1, i-2009 ku-4: i-12 PM
I-Seo iyinkimbinkimbi, noma kunjalo uma isiza sakho sisemthethweni futhi uhlala ucabanga ngokubaluleka, kuyasebenza impela. Kubalulekile futhi ukubona (izibalo noma amathuluzi we-google wemaster) yimaphi amagama abantu abawadingayo. Kuyangimangaza ukuthi yimaphi amagama abantu abawabeka ekuseshweni kwabo.
Ukubuka ukusesha ukuze ukhule futhi uqede izinto eziletha abantu kuwe sayithi ezingadingi ukuba khona kunendlela enhle yokwandisa ukuhlobana kwakho futhi…
Ukubeka umbono wakho kumabhulogi afana nalena kuyindlela enhle futhi!
Jun 28, 2011 ku-7: 33 PM
UMA ubuza lokhu phambilini, ngizoyiphendula ngentokozo kepha manje akungenxa yamathuluzi amaningi e-google ahlunga zonke izixhumanisi zewebhusayithi ezitholakala kwinjini yokusesha nangenxa yokuvuselelwa kwe-google. I-SEO iba lukhuni kulezi zinsuku eyenza ochwepheshe be-SEO babe namasu futhi bakhohlise, lokho futhi kuwumphumela omuhle.